Semalt: Manakana ny Pop-Ups amin'ny Chrome
Raha mandany fotoana be dia be ianao ao amin'ny Internet, dia mety ho diso fanantenana ianao, ary mety hampiaraka amin'ny dokam-barotra, ny dokam-barotra, ny dokambarotra ary ny dokambarotra. Manazava i Max Bell, ny Semalt Manager Success Manager, fa tsy misy dikany ireo dokam-barotra ireo, saingy azo atao ny manaisotra ny rehetra.
Sasao ny doka pop-up ao amin'ny Chrome amin'ny fampiasana plugin plugin:
Na dia azo ampiasaina amin'ny Google Chrome aza ny adiresy fanakanana adiresy samihafa dia ny Adblock Plus no tsara indrindra. Manao asa mangina ao ambadiky ny tranonkalanao izy ary tsy mamela anao handratra anao ny doka. Raha mampiasa Firefox ianao dia tsy afaka mampiasa ity plugin ity. Na izany aza, misy plugins hafa mitovy amin'izany dia misy amin'ireo mpampiasa Firefox. Mila maka sy mametaka Adblock Plus ianao ary tsy manadino ny mamelona azy. Ny Plugin dia ho tafiditra ao amin'ny tranonkalanao Chrome, izay manakana pop-ups tsy hiseho mandritra ny andro maromaro.
Inona ny Adblock Plus?
Araka ny voalaza tetsy aloha, Adblock Plus dia plugin iray izay azo ampidinina amin'ny navigateur Google Chrome. Sokafy ao amin'ny tranokala Chrome ianao ary tsidiho ny Chrome Web Store, arahin'ny pejy Adblock Plus Extension. Eto, dia hahita bokotra manga eo amin'ny sehatra havanana ianao, amin'ny filazana Add to Chrome..Tsy maintsy tsindrio io safidy io, ary halefa haingana ny fanitarana. Raha vantany vao tafiditra tanteraka ianao, dia tsy mila manavao ny varavarankelinao na ny tranonkalanao ianao rehefa manomboka ny Adblock Plus. Ity fanitarana ity dia hanampy marika mena amin'ny mombamomba ny navigateur. Amin'ny fotoana rehetra dia azonao atao tsindriana amin'ny sary ianao ary jereo ny angon-drakitra izay nakaton'ny mpizarazara anao. Azonao atao ihany koa ny manokatra tranokalam-pejy na pejy iray manontolo ary manova ny doka voatahiry ao amin'ny sehatra Options.
Adblock Plus dia tsy afaka mandany votoaty vitsivitsy, arakaraka ny loharano sy ny endrika. Raha mahita ity olana ity ianao, dia tokony kitiho ny bokotra Stop ary tsindrio ny Enable ity Website ity mba hamadika ireo rafitra fanakanana adin-drakitra avy hatrany. Azonao atao koa ny manafoana izany amin'ny fanakanana adiresinao sy ny famerenana ny pejy izay ahitana ny votoatiny na lahatsoratra izay tianao hijery sy vakiana. Raha toa ka vita tsara ny zava-drehetra, dia manohy mamaky ny votoatiny ianao.
Tokony hotadidinao fa ny Adblock Plus dia tsy manome antoka fa hikatona ny dokam-barotra rehetra ao amin'ny Google Chrome-nao Chrome, fa ny ankamaroan'izy ireo dia tratrany. Misy orinasa marobe sy marika marobe izay mandoa betsaka ny dokam-barotra ataon'ireo mpikatroka. Soa ihany, ireo orinasa dia mazàna no mividy dokam-barotra tahaka izany; Midika izany fa afaka manala ny dokambarotra rehetra avy amin'ny tranokalanao sy tranonkala web ianao.
Poper Blocker Tsara dia fomba hafa amin'ny Adblock Plus. Tena fitaovana tsara, izay tsy mora. Raha te hanana programa tsotra nefa mahatalanjona izay tsy misy fiantraikany amin'ny dokam-pandihinana marobe sy mikendry manokana ireo pop-ups, dia manoro hevitra anao hanandrana ny Poper Ad Blocker ianao. Manome antsika fampandrenesana haingana mba hanakanana pop-up manokana izany na tsia ary mamela anao hamonjy fotoana marobe. Ankoatra izany, ny fampahalalam-baovao dia ahafahantsika manakana na manafoana ireo dokam-barotra pop-up izay tsy tadiavintsika amin'ny ho avy Source .